I-LACQUER KITCHEN CABINETS PROS AND CONS - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-Lacquer Kitchen Cabinets Pros and Cons
I-Lacquer Kitchen Cabinets Pros and Cons
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwiikhabhathi zekhitshi zenzuzo kunye nokuzibandakanya kubandakanya ukuba ziyintoni, izimbo ezahlukeneyo, ipeyinti oyisebenzisayo kunye nendawo onokuyithenga. Iikhitshi zintliziyo yamakhaya onke apho iikhabhathi zekhitshi zibandakanya ubungqingqwa kunye nekhwalithi yekhitshi. Iikhabhathi zeLacquer zizisa iimpawu zazo ezizodwa kuyilo lwakho lwekhitshi.
I-Lacquer ibonelela ngokugqibelela kwenqanaba eligudileyo elijongeka linomtsalane kunye nemilinganiselo yokungenamkhawulo yemibala onokukhetha kuyo.
Yintoni iLacquer Kitchen Cabinets?
I-Lacquer Kitchen Cabinets Pros
I-Lacquer Kitchen Cabinets Cons
Iikhabhathi zeKhitshi eziMhlophe eziMhlophe
Ipeyinti yeLacquer yeeKhabhathi zaseKhitshini
I-Lacquer vs Paint Iikhabhathi zeKhitshi
Ngaba iLacquer ilungele iikhabhathi zasekhitshini?
Iikhabhathi zekhitshi zeLacquer Indawo yokuthenga?
Enye yeendlela eziphambili ekhitshini yekhabhathi kukugqitywa kwe-lacquer. Idala ifuthe lokubonwa kunye nokungafaniyo kunye nokunikezela ngobume obukhethekileyo kwaye ngokulula inokuba yindawo ekujongwa kuyo ekhitshini lakho.
I-Lacquer yimveliso esekwe kwisinyibilikisi eyenza isambatho sokwenziwa kwimiphezulu ukuze kukhanye ukukhanya okuphezulu. Ukugqitywa kwe-Lacquer yinkqubo ethi isetyenziswe kwiipeyinti zekhabinethi yokhuni kwaye inikeze i-opaque, ityebile kwaye ilungile, i-matte okanye i-glossy finish.
I-Lacquer iyaphefumla, ayinamanzi kwaye inendalo enganyangekiyo eyenza ukuba ibe lolona khetho lufanelekileyo kwiikhabhathi zasekhitshini.
Musa ukudibanisa ukugqitywa kwe-lacquer nge-varnish. Ngelixa zombini zibonelela ngokuqaqamba okuqaqambileyo kunye nokuhombisa, i-lacquer inokucaca zombini okanye umbala; Ngelixa i-varnish ihlala icace gca. I-Lacquer iyafumaneka kwiindidi ezintathu zokugqiba-ukugqiba, ukugqiba okuphakathi kunye nokukhanya okuphezulu.
Ukulunga kunye nokubi kweekhabhathi zekhitshi ze-lacquer kubaluleke kakhulu ukuba uziqwalasele ukuba ucwangcisa ukuphucula okanye ukucokisa iikhabhathi zekhitshi kunye namandla okugcina.
Iikhabhathi zasekhitshini zeLacquer zinokukunika inkangeleko yekhitshi lamaphupha akho ngexabiso elinokufikeleleka kodwa zisenokunganikezeli ngokupheleleyo ngezibonelelo zexesha elide kunezinye zezinto ezigqityiweyo eziphezulu ezinokubonelela.
Ngoku, xoxa kakuhle nge-lacquer ekhitshini iikhabhathi zenzuzo kunye neengozi eziqala ngokulunga.
• Iikhabhathi zekhitshi ezigqityiweyo nge-Lacquer zihlala zomelele kakhulu kwaye ziyanyangeka kumonakalo ngakumbi kwiasidi, ialkali, amanzi kunye nokukrala.
• Iikhabhathi zekhitshi ze-Lacquer zibonelela ngomhlaba onzima kwaye zinamandla okuhlala ixesha elide ngaphandle kokuphambuka ngokungafaniyo neekhabhathi ezenziwe ngevanishi, i-shellac, amabala endalo eoyile kunye ne-polyurethane. Ukugqitywa kweLacquer kuhlala kucacile ixesha elide ngelixa ezinye iindlela zokugqibela zihlala ziba tyheli.
• Olunye uncedo lweekhabhathi ezigqityiweyo ze-lacquer kukuba zomelele kwaye zomelele kwaye zinokuhlala kangangeshumi leminyaka.
Ngaba ukhona umntu ophethe umtshato
• Itywina le-lacquer likhusela iinkuni ngaphakathi ngaphakathi. Ukufaka idyasi entsha okanye ezimbini zelacquer kwiikhabhathi zakho zasekhitshini ngaphambi kokuba ziqale ukubuna kunokunceda ukugcina ukubonakala kwazo.
• I-Lacquer iza ngemisipha eyahlukeneyo- inokuba nebala elingafani nebala okanye isisheyi esifana nepeyinti enombala oqinileyo.
• I-Lacquer isebenza ngokugqibeleleyo xa ifafaziwe kuba iyanyibilika kwiikhabhathi zasekhitshini ziyinika ukugqiba okusemgangathweni okuziva kufana nokuthamba kwe-lacquer ngaphandle kweebrashi.
• I-Lacquer inokusetyenziswa nakwinto eyenziwe ngomthi.
• Ukugqitywa kwe-Lacquer kuyomisa ngokukhawuleza kwimizuzu eli-15 kwiqondo lobushushu begumbi okwenza kube lula ukutshiza iingubo ezininzi ngosuku olunye.
• Ulondolozo olulula ukusukela oko iikhabhathi zekhitshi zelacquer zinokucocwa ngelaphu elithambileyo okanye ngelaphu le-microfiber kunye nezicoci ezingafunekiyo.
• Ukufumana amabala anenkani kwiikhabhathi zekhitshi ezinobumba obuphezulu, ungasebenzisa i-ethyl alcohol engaphezulu.
• Ukulungiselela iikhabhathi zekhitshi lacquer, kunqande ukusebenzisa iasithoni, ibhitumene encinci, itrichlorethylene, iammonia, izithambiso ezirhabaxa kunye neephedi zentsimbi zoboya - zinokujika umbala kwaye zingakrwempa iingcango zingaphaya kokulungiswa.
• Iikhabhathi zekhitshi ze-Lacquer aziyichasi kwaphela imichiza kubandakanya ityuwa namanzi.
• I-Lacquer iqala ukonakala kuqala ijikeleze isitovu, isinki kunye nomenzi wekofu ukuba ibekwe phantsi kwekhabhathi ejingayo kuba i-lacquer ayinakubamba amanzi, ubushushu okanye umphunga.
• Ukuba ayifakwanga kakuhle, i-lacquer inokuba ne-blush ebusweni xa isoma - uya kuyibona kwangoko iblack-white blotch. Oku kuhlazeka kunokwenzeka xa kufafazwa i-lacquer ngexesha lokufuma okuphezulu.
• Impendulo yendalo yomthi xa ifunxa ukufuma okanye xa kukho ukutshintsha kweqondo lobushushu - iinkuni ziyakhula okanye izivumelwano. Ezi ntshukumo zincinci zanele ukwenza ukuba i-lacquer igqibe ukuqhekeka kuba ibukrakra.
• Iikhabhathi zekhitshi zeLacquer zifuna amanqanaba aphezulu olondolozo ukuze ihlale ikhanya. Ifanitshala yefanitshala eyenzelwe ngokukodwa imiphezulu ye-lacquer iya kufuneka ekucoceni iikhabhathi.
• Iikhabhathi zekhitshi ze-Lacquer nazo ziyathandeka ekuthambiseni ixesha elide kwaye ukungafezeki kumphezulu kubonakala ngokulula njengokukhuhla kunye neentsimbi.
• Iikhabhathi zekhitshi ze-Lacquer kufuneka zihlaziywe rhoqo.
Iikhabhathi zekhitshi ezinobukhazikhazi obuphezulu ziyaziwa kakhulu kule mihla kunokuba zazinjalo ngeminyaka yee-1970 xa zazigqibela ukwenzeka kuba zilungele ngakumbi ikhitshi yesitayile yangoku enefafade yekhabhathi ethe tyaba.
Iingcango zekhabinethi eziqaqambe kakhulu kunye nobuso beedrowa zinezinto eziqaqambileyo ezibonisa ukukhanya ezenza ukuba ithandwe kakhulu kwizikim zoyilo zekhitshi zale mihla.
Kuba iikhabhathi zekhitshi ezinobukhazikhazi obuphezulu zinesiphelo esimenyezelayo esibonisa ukukhanya, kuyanceda ukwenza indawo yekhitshi izive inkulu kwaye ivule ngakumbi. Oku kwenza ukuba iikhabhathi zekhitshi ezinobukhazikhazi obuphezulu zibe lukhetho oluhle kakhulu kwizithuba ezincinci zekhitshi.
Kwelinye icala, ukubonisa ukukhanya kakhulu kukwafumana iminwe, ukungcola kunye nokukrwela okubonakalayo; ungakhathazeki kuba iikhabhathi zekhitshi ezinobumba obuphezulu zilula ukuzicoca.
Sebenzisa ilaphu le-microfiber elingaqaliyo ukucoca iingcango zekhabinethi kunye nobuso beedrowa kuba iyakuthatha ngokulula naziphi na amasuntswana othuli kumphezulu wengcango.
Ukuthatha isigqibo ngombala wekhabhathi zasekhitshini akusoloko kulula, kodwa akukho nto izisa ukukhanya kunye nemeko yendawo ekhitshini enje ngeekhabhathi ezimhlophe zelacquer zasekhitshini.
Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe ezihonjiswe kakhulu zezona zithandwa, ezona mbala zihle kakhulu ukuzigcina. Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zelacquer ezigqityiweyo kubumnandi obunemibala onokuyisebenzisa kuba zikhangeleka zicocekile kwaye zezala maxesha.
Ikhitshi lale mihla lingaphezulu libonisa iikhabhathi ezimhlophe zelacquer ezinokuthelekisa Imiphezulu yeetafile zecarlac quartz .
Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe ze-lacquer zibonisa iminwe embalwa kunaye nawuphi na umbala. Umhlophe ngowona mbala uthandwayo ngabanini bamakhaya kwiikhabhathi zabo kuba ezimhlophe zinokuba zombini zintle, zibukeka zale mihla, zinesitayile kwaye zinobunkunkqele kwikhabhathi yekhitshi.
Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zelacquer ziyafikeleleka kakhulu kwaye ukuba uthenga kwivenkile, iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zelacquer ezimhlophe zihlala zikwizinto zesitokhwe; kwaye ke ezi zinto zilunge kakhulu kubanini bamakhaya. Ukudityaniswa kwakhona koku-odolwa okanye ukutshintshwa kunokwenziwa ngokulula ngaphandle kokulinda iiveki. Bona Okuninzi izimvo zekhabhinethi emhlophe Apha.
Xa kufikwa ekuzinzeni kwexesha elide kunye nobulukhuni, ukusebenzisa i-lacquer yangaphambi kokukhutshwa kweziphumo ineempawu ezigqwesileyo kunye neziphezulu. I-catalyst iyafana ne-epoxy hardener, kwaye ke xa idityaniswe kwi-lacquer iyoma ngakumbi ngakumbi xa inyangeke ngokupheleleyo.
Omnye umzekelo yi-Hi-Bild pre-catalyzed lacquer and primer surfacer from Sherwood product line at Sherwin Williams.
Ezinye iintlobo eziphambili ze-lacquers ezisetyenziselwa zona ukupeyinta iikhabhathi zasekhitshini kubandakanya:
• I-lacquer yeNitrocellulose
• I-lacquer ye-Acrylic
• I-lacquer esekwe emanzini
Funda ngakumbi malunga imibala yekhabinethi yekhitshi engapheliyo kweli phepha.
• Ukuxhathisa kwemichiza ye-lacquer kungcono kakhulu kunepeyinti. Ukuchitheka kokutya kunye neprinta yeminwe kusula ngokulula kwiikhabhathi zekhitshi ezinamacwecwe ngaphandle kokonakalisa ukugqiba. Ngelixa ipeyinti ikhulula ukukhanya kwayo ekucoceni kakhulu okanye ekusebenziseni izixhobo zokucoca iikhemikhali. Ingubo ecacileyo ngaphezulu kweekhabhathi ezipeyintiweyo inokusetyenziswa ukukhusela, kodwa nge-lacquer, idyasi ecacileyo eyahlukileyo ayifuneki kwaphela.
• I-catalyst eyongeziweyo kwi-lacquer ekhutshiweyo, yenza ukuba ukutyabeka komele kube nzima ukwenza umphezulu ube mhle. Ipeyinti kwelinye icala, yoma ithambe kwaye inamanqaku alula xa uphatha iikhabhathi ezisandula ukupeyintwa; Iipeyinti ezimnyama zoma kancinci.
• Ixesha elomileyo le-lacquer engaphambi kokukhutshwa ngokukhawuleza ngaphandle kokumakisha ukugqitywa; Ngelixa ipeyinti ihlala imile ebusuku okanye ngaphezulu. Ixesha elomileyo elikhawulezayo lokusebenzisa i-lacquer ngumtshintshi womdlalo ekugqibezeleni iprojekthi yekhabinethi yekhitshi kunokuba ubusebenzisa ipeyinti.
• Enye yezinto ezingalunganga ngokusebenzisa i-lacquer livumba layo eliqinileyo lomlilo; umoya ongenisa umoya olunge kakhulu uyimfuneko. Ivumba lepeyinti likhulu kakhulu.
Ipeyinti yeLacquer ihlala ikhethelwa iikhabhathi zasekhitshini kuba inika ukubukeka okuhle, okwangoku kunye nokuhle kwekhabhinethi yakho yasekhitshini.
Ipeyinti yeLacquer inikezela ngokuchaseneyo nefuthe kunye nokuguquguquka. I-Lacquer ibonelela ngokukhanya okucacileyo okuqaqambileyo, ukunganyangeki ngamanzi, ukuphefumla kunye nohlobo lokumelana ne-chip olukhetho olufanelekileyo kwikhabhathi yekhitshi.
Enye inzuzo enkulu yokusebenzisa ipeyinti ye-lacquer kwiikhabhathi zasekhitshini kukuba iyakhawuleza ukomisa kwaye oku kwenza kube lula ukufaka idyasi yesibini.
Ngokungafaniyo nokugqitywa kwentlaka, i-lacquer ayifuni ukuxubana okanye ukulungiswa. Ayifuni zixhobo ezikhethekileyo okanye ubuchule. Ungasebenzisa ibrashi okanye usebenzise isitshizi sepeyinti, zombini ziya kunyanga ngokugqibeleleyo.
Xa isetyenziswe ngokufanelekileyo kwaye phantsi kweemeko eziqhelekileyo, ipeyinti ye-lacquer inokugqitha i-polyurethane, i-varnish, i-shellac okanye amabala kuba ingena nzulu emthini ubomi obude.
Zintathu iintlobo zokugqitywa kwe-lacquer-ukugqitywa kwe-matte, ukugqiba okuphakathi (i-gloss-semi) kunye nokugqitywa okuphezulu kokuqaqamba.
Kwiikhabhathi zasekhitshini, olona khetho lufanelekileyo kukugqibezela kwe-gloss okanye ukugqiba okuphezulu kwe-gloss. I-sheen kwezi ntlobo zokugqitywa kwe-lacquer iya kunceda ukubonakalisa kwaye yomelele ekuhambeni kwexesha.
Uninzi lwepeyinti yokuhombisa kunye nokukhanya okuphezulu okucwebezelayo kuye kwandisa ukomelela xa kuhlanjwa- kuhlala kuchazwa njengokuhlanjwa. Kungenxa yokuba kukho intlaka eninzi kunye nezibopheleli ezisetyenziselwa ukwenza ubumenyemenye kunye nokupeyinta okuphezulu kwelensi kunika ukomelela ngakumbi kwiikhabhathi zasekhitshini.
Imatte, iqokobhe leqanda okanye ipeyinti ye-lacquer egqityiweyo ayinako ukuhanjiswa njenge-gloss-gloss okanye i-gloss ephezulu kwaye ngenxa yoko baba semngciphekweni wokurabha ipeyinti xa ucoca okanye uhlikihla ikhabethe lakho lekhitshi.
3325 W Ali Baba STE 602
ILas Vegas, iNV 89118
Tsalela Us: (702) 508-4827
• Ikomkhulu le-Snaidero e-USA
Ngo-19700 kwiAvenue Vermont Avenue
UJoe jonas kunye noSophie Turner
Isebe laseMntla Melika:
• Uyilo lwe Element
235 Isitalato iCrompton
UCharlotte, North Carolina 28273
• Iikhitshi ze-UB-Uyilo lweKhitshi kunye neekhabhathi
I-2600 Longhorn Blvd, Suite 104
IAustin, TX 78758
UMzantsi Austin / SoCo
3114 South Congress Ave, Icandelo 101
(Ukupaka ecaleni kweCrowbar eColeman)
UAustin, TX 78704
Iindawo eziphakamileyo zaseSan Antonio / Alamo
7959 Broadway, # 304
ISan Antonio, TX 78209
69 iBlanchard St.
ENewark, NJ 07105
Ngaba ubona naziphi na izinto ezilungileyo nezingalunganga zekhitshi zelikhitshi ezingadweliswanga apha? Yabelana ngeengcinga zakho malunga nezi ntlobo zekhabhathi zasekhitshini kwicandelo lamagqabaza. Ndwendwela eli phepha ukubona okungakumbi Izitayile zekhabhinethi yasekhitshini .
yintoni eyona ndoda ilungileyo
elona gama liqhelekileyo eMelika
Ngubani igama lokugqibela likajay z
ulwazi olufaka kwisimemo somtshato
iinwele zomtshato ngeenwele ezisongiweyo
Intetho emfutshane emfutshane yomzalwana